Raha resaka ezaka sy hetsika asa soa, marathon no anisan'ny safidy malaza indrindra any. Ny hazakazaka marathon dia mamela ny mpihazakazaka hampiseho ny tanjany, ny fahaizany ary ny fanolorantenany amin'ny fiantrana na mpanohana azy amin'ny vokatra marathon mahazatra. Tsy misy na inona na inona qu ...Hamaky bebe kokoa »
Inona no fitafiana miaro ny masoandro? Inona no fitsaboana UPF?
Raha mpandehandeha amoron-dranomasina mavitrika ianao, mpitsangantsangana na zaza an-drano, mety ho taraina ianao noho ny filentehan'ny masoandro amin'ny masoandro rehefa mihodina ianao. Rehefa dinihina tokoa, dia asaina mametaka takelaka fanaovan-jiro isaky ny adiny roa na mahery - indrindra fa rehefa milomano ianao, swimmi ...Hamaky bebe kokoa »
Fa maninona no mafana be ilay lobaka? Rehefa mitady torohevitra momba ny fisafidianana fitaovana hanaovana T shirt mahazatra ny mpanjifako dia azoko antoka fa hanome an-tanana izany aho. Raha manontany ahy ianao hoe maninona, lazaiko anao fa ny triblend tee no zavatra malefaka indrindra nokasihinao. Araka ny efa noheverinao fa ...Hamaky bebe kokoa »